VOAMBOLANA FAMPIASA EO AMIN’NY TONTOLON’NY FANDRAHARAHANA SY NY FITANTANANA – Blaogin'i Voniary
VOAMBOLANA FAMPIASA EO AMIN’NY TONTOLON’NY FANDRAHARAHANA SY NY FITANTANANA
Hanolotra santionam-boambolana Malagasy hanampy ireo izay efa anananao indray aho androany.
Jereo ato ireo efa nivoaka teo aloha:
1- Voambolana fampiasa eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fitantanana
2- Voambolana fampiasa eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fitantanana
Velona ny teny Malagasy
Maro ny milaza fa sarotra ny teny gasy. Ao koa ireo nanatsatso avy hatrany raha nahita ireo voambolana navoakan’ny blaogin’i Voniary teo aloha nanao hoe : « raha tianareo ho hain’ny besinimaro ny voambolana dia mba ataovy tsotra fa aza atao sarotra tononina sy manimba sofina tahaka ireo ». Averiko eto ny namaliako ireo olona ireo.
Voalohany indrindra, velona ny fiteny malagasy matoa misy teny vao mivoaka hatrany. Nahoana moa no lazaina fa FITENY MATY ny Latin, Hebreux biblique, Akkadien, Phénicien sy ny maro hafa? Ny antony dia satria tsy misy mampiasa amin’ny fiainana andavanandro intsony ireo fiteny ireo. Misy koa ireo FITENY TANDINDONIN-DOZA vokatry ny fanjanahan-tany niseho teo an-toerana toy ny Araméen, Kamilaroi, Quechua, Afade, Ajumbu sy ny sisa. Matoa mbola tsy ao anatin’ireo lisitra ireo ny fitenintsika dia noho izy mbola maro mpampiasa sy mivoatra hatrany.
Fomba ahaizana teny gasy
Faharoa manaraka izany, tsy misy afa-tsy ny FAHAZARANA ihany no lalan-tokana afahana mifehy fiteny iray. Izany fahazarana izany dia azo avy amin’ny alalan’ireto asa ireto: FAMAKIAN-TENY, FANORATANA ary FIRESAHANA. Toy izany no ianarana ny fiteny frantsay, anglisy, espanola, japoney sy ny sisa. Nahoana moa rehefa fiteny vahiny dia mazoto isika mandany fotoana, ron-doha ary vola aman-karena, fa ny teny gasy toa atao an-jorom-bala?
Tsarovy fa na ireo teny vahiny ampiasaina amin’ny andavanandro ireo aza dia mety ratsy faneno teo an-tsofinao tamin’ny voalohany fa rehefa ela dia zatra ianao ary tianao ny mampiasa azy. Koa aza atao valalan’amboa re ny fitenin-drazantsika e, ny tompony aza tsy tia, fa ataovy toy ny fary lava vany kosa ka tsy lany hamamiana. Mba manaova tahaka an’i Di hoe « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko »
Ireto indray ary ireo voambolana notsongaina tao amin’ny AHITSIO NY DISO (Boky II):
fianarana teny gasy, teny gasy, teny malagasy, velona ny teny Malagasy, voambolana fandraharahana, voambolana fitantanana, voambolana malagasy
Tiako ny tenako sy ny momba ahy rehetra
Ho an’ny tanin-janako
2 commentaires sur “VOAMBOLANA FAMPIASA EO AMIN’NY TONTOLON’NY FANDRAHARAHANA SY NY FITANTANANA”
Nirinasoa dit :
10 février 2021 à 10 h 59 min
MAnkasitraka e! tena ilaina ny toy izao.
voniary dit :
22 février 2021 à 8 h 26 min
Mankasitraka anao nitsidika!